द्रुत सिक्ने अंग्रेजी र कुनै पनि विदेशी भाषा। सिक्न उत्तम तरिका
विदेशी भाषा सिक्ने भाषा भाषाहरू
विदेशी भाषाहरू सिक्न भाषा कार्डहरू स्वयं-अध्ययनको सरल र सबैभन्दा साधारण विधि हो। एक पक्षले कठिन शब्द राख्दछ, र अर्को पक्ष यसको अर्थ वा अनुवाद छ। कार्डहरूको डेक ड्राइंग गरेपछि, तपाईंले कार्ड हेर्नु भएको छ, तपाईले पहिले नै सिकेका कुराहरूलाई बिस्तारै सेट गर्नुहोस्, जब सम्म तपाईंले सम्पूर्ण डेक जान्नुभएन। 10,000 नयाँ शब्दहरु लाई सम्झना र उनको […]
शब्दावलीमा सुधार कसरी गर्ने? नयाँ शब्दहरू याद गर्ने उत्तम तरिका
शब्दावलीमा सुधार कसरी गर्ने? हरेक विद्यार्थी जो विदेश भाषा सिकिरहेको छ यो प्रश्न सोध्छ। शब्दावली सुधार गर्न धेरै आधारभूत तरिकाहरू छन्, जुन हामी यस लेखमा राख्छौं: 1. शब्दहरू सुन्नु र दोहोर्याउने शब्दहरू दोहोरिने 2. फ्लैश कार्ड विधि प्रयोग गर्दै 3. दृश्यहरूसँग संघहरू सिर्जना गर्दै 4. नयाँ शब्दहरू समावेश गर्ने वाक्य र वाक्यांशहरूको सम्झना 5. नयाँ […]
कसरी अंग्रेजी छिटो सिक्नु हुन्छ?
कसरी अंग्रेजी छिटो सिक्नु हुन्छ? मैले आफैलाई यो प्रश्न दुई वर्षअघि (32 वर्षको उमेरमा) सोधें। सिकारबाट नयाँ भाषा सिक्न सक्रिय रूपमा सुरू गर्न, मैले तीनवटा मुख्य समस्याहरू पूरा गरें: 1. शब्दावली र मेहनत गर्ने शब्दहरूको भण्डारण सुधार 2. विदेशी भाषाको अध्ययनको लागि समयको कमी 3. भाषा प्रथालाई कसरी भाषा अभ्यासको लागी पत्ता लगाउने अझ राम्रो […]
भाषा प्रथाको लागि भाषा अभ्यास कसरी खोज्ने?
भाषा प्रथाको लागि भाषा अभ्यास कसरी खोज्ने? यो प्रश्न विदेशी भाषा सिक्न लगभग हरेक व्यक्तिको रुचि छ। मोबाइल LingoCard आवेदन को पहिलो संस्करण को सफल विकास पछि यसको सार्वजनिक प्लेसमेंट र पहुँच को आसानी, ऐप ले दसियों को प्रयोगकर्ताहरु लाई प्राप्त गरे। तर कुन भाषा अभ्यास? हामीले सोचे – किन हामी सबैलाई एकताबद्ध गर्दैनौं कि […]